Qeybta isku duwidda ee fiidiyowyada ku saabsan geeddi-socodka wax soo saarka walxaha kala duwan.
Xaqiiqdii waxaad ku aragtay qaar ka mid ah
Sidee loo sameeyaa waraaqaha waraaqaha balaastigga ah ee Australia
Cajiib. Ustaraaliya waxay isticmaashaa waraaqaha balaastigga ah ee qoyan oo aan lakala jabin karin. Intaa waxaa u dheer samaynta been abuur been abuur ah. Ma ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo kursi xafiis
Wanaagsan sida loo sameeyo, wax dheeri ah ma dhejinin muddo dheer. Ma jiro cod laakiin waxaad arki kartaa dhammaan ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo kubbadda cagta ee Koobka Adduunka ee 2018, 2014 iyo 2010
Codsi saaxiibkay Edgardo Confessore barta facebook (a dildilaaca boomerangs) Waxaan idiinka tegayaa xoogaa fiidiyowyo ah iyo macluumaad yar oo ku saabsan sidee loo sameeyaa kubada cagta kubada cagta aduunka.
Kubbadda Koobka Adduunka ee Koonfur Afrika ee loogu talagalay Koobka Adduunka ee FIFA FIFA ee 2010, ayaa lagu magacaabaa Adidas jabulani. Waxaa sameeyay Adidas waxaana loo qaabeeyay laguna soo saaray Jaamacadda Loughborough, Boqortooyada Ingiriiska. Ereyga Jabulani macnaheedu waa in Zulu: dabbaaldeg
Kubaddu waxay ka kooban tahay 8 koronto oo saddexda dhinac leh oo heerkul ahaan isku xidhan, oo laga sameeyay ethylene-vinyl acetate (EVA) iyo polyurethanes thermoplastic (TPU) si loo sameeyo kubbad wareegsan oo wareegsan.
Sidee loo sameeyaa waraaqo ciid ah
Ma jeceshahay inaad ogaato sida walxaha iyo walxaha loo sameeyo? Fiiri Sidee loo sameeyaa
Maanta waxaan soo qaadaneynaa sida loo sameeyo warqadda ciidda.
Gadaal weyn oo warqad ah ayaa laga furay, waxaana la sii mariyaa daabacad daabacanaysa oo hal dhinac ku daabaceysa hadhuudhka uu yeelan doono warqadda ciideed, tusaale ahaan P80
Duub kale, koollo ayaa lagu mariyaa dhinaca aan la daabicin. Si loo soo jiito hadhuudhka (kristantarrada) warqadda lagu dhejiyay, waa koronto lagu soo oogay oo soo jiidanaya iyaga si ay qaar badani ugu dhegaan xabagta
Sida loo sameeyo qaanso
Waan jeclahay qaansooyinka. Waxa kale oo aan haystaa mid ka mid ah decathlon, oo aan wakhti fiican la qaato. Laakiin… Akhri akhriska
Sidee loo sameeyaa kubbadaha ranjiga
Ayer Otrebor wuxuu na weeydiiyay madasha su'aasha ku saabsan sida loo sameeyo kubbadaha ranjiga lagu sameeyo ee guriga lagu sameeyo. Kama aanan xallin su'aashaada laakiin waxaan rajeyneynaa in qoraalkan uu fikrad kaa siinayo oo aad nala wadaagi karto
Waxaan raadineynay macluumaad, labadaba Isbaanish iyo Ingriis, runtiina waxay tahay in aanaan helin xal guriga lagu sameeyo. Kubadahaani way ka dhib badan yihiin sida ay u muuqdaan kuwo mudnaan leh.
ka kubadaha Waxay ku samaysan yihiin wax baabi'in kara iyo wax soo saar cunno ah, waan cuni karnay waxna nagama dhici doonaan.
Kaabsalku wuxuu ka samaysan yahay gelatin leh iskudhaf alaabooyin kale oo cunto ah, qarsoodi ah. Gudaha leh midabaynta cuntada iyo polyetylen glycol, ayaa loo isticmaali jiray sharoobada.
Sidee loo sameeyaa cirbadaha hypodermic
Cirbadda hypodermic waa mid ka mid ah hal-abuurnimada isbeddelay ee daryeelka caafimaadka isla markaana hagaajisay tayada nolosheena. The… Akhri akhriska
Sidee loo sameeyaa tuubooyinka dhaadheer
Fiidiyowga soo socda ee ku saabsan nidaamka wax soo saarka tubbada dhaadheer waa midka aan aad u jeclaa ilaa ... Akhri akhriska
Sida loo sameeyo looska iyo bolts
Inbadan oo idinka mid ah ayaa qiyaasi doona sida boolal iyo lows loo sameeyay, laakiin waxaa mudan in si toos ah loo arko. Ma yihiin… Akhri akhriska
Sidee loo sameeyaa silsilado bir ah
Sida silsiladaha loo sameeyo. Waxa weheliya kanaalka waa mid ka mid ah su'aalaha aan marar badan naftayda weydiiyey. Ha sameyn… Akhri akhriska